संखुवासभा सामूहिक हत्याकाण्ड : कसरी पुग्यो प्रहरी आरोपितसम्म ?
भदौ २१ गते संखुवासभाको मादी नगरपालिका-१ उम्लिङमा एक परिवारका ६ जनाको हत्या भयो । हत्याबारे प्रहरीलाई खबर आएपछि तत्कालै प्रहरी घटनास्थलमा पुग्यो । सुरुमा प्रहरी घटनास्थलमा पुगेर देखेको सबै प्रमाणलाई स...
अहिले नेपाली हिन्दु समुदायमा तीजको रौनक छ । खासगरी हिन्दु अविवाहितले नारी असल पति पाउन र विवाहितले पतिको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र प्रगतिको लागि तीजको ब्रत बस्ने गर्छन् । यसरी पतिको दीर्घायुको कामना गरे...
नेपालमा ‘फेमिली’ हत्याको ट्रेन्ड : १८ वर्षमा ६ परिवारका ३२ जना मारिए
संखुवासभाको उम्लिङ, अर्थात् मादी नगरपालिकाको एउटा गाउँ । योभन्दा अगाडि त्यति चर्चामा नआएको यो गाउँ अहिले समाचारको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । दुई दिनयता यहाँको एउटा दुःखद् घटनाको समाचार लगातार आइरहेको छ । घटना ह...
विनाअनुमति नेपाली आकाशमा किन उड्यो भारतीय हेलिकप्टर ? गृह मौन
साउन १५ मा दार्चुलामा भएको तुइन प्रकरणमा नेपाल सरकार केही बोलेन । विपक्षी र सत्तापक्षका सांसदले नै भारतीय एसएसबीले तुइन काटेपछि नेपाली युवा जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनामा सरकारको मौनताको विरोध गरे । पाँ...